Hiaraka amin'i Jesosy | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Switzerland
Manao ahoana ny fiainanao ankehitriny? Ianao ve dia mitondra enta-mavesatra eo amin'ny fiainana mampahory sy mampisy azy ireo? Efa nampiasa ny herinao ve ianao ary nanery ny tenanao hatrany amin'ny fetran'izay azonao atao? Ny fiainanao, araka ny fanandranao azy ankehitriny, dia mandreraka anao, na dia maniry fatra lalandava aza ianao dia tsy hahita. Jesosy niantso anao hankeo aminy: «Mankanesa at me amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana; Te hamelombelona anao aho. Ento ny ziogako ary mianara Amiko; fa malemy fanahy sy manetry tena amin'ny fo aho; dia hahita fitsaharana ho an'ny ainao ianareo. Satria malefaka ny ziogako ary maivana ny entako » (Matio 11,28: 30). Inona no didin'i Jesosy amintsika amin'ny alàlan'ny antso nataony? Zavatra telo no noresahiny: "Mankanesa aty amiko, ka ento ny ziogako, ka mianara amiko".
Jesosy dia manasa antsika ho avy ka honina eo anatrehany. Manokatra varavarana ho antsika izy mba hananana fifandraisana akaiky kokoa amin'ny fiarahany aminy. Tokony ho faly isika miaraka aminy ary mijanona ao aminy. Manasa antsika hamboly fiarahana bebe kokoa aminy isika ary hahafantatra azy bebe kokoa - ka faly hahafantatra azy sy hatoky azy hoe iza isika.
Ento ny ziogako
Nilaza tamin'ny mpihaino azy i Jesosy fa tsy ny hanatona azy ihany, fa ny hitondrany ny ziogany koa. Mariho fa tsy ny “ziogany” no ianasan’i Jesosy fa manazava fa ny ziogany dia “entany” toy ny teo koa. Ny zioka dia hazo fisaka vita amin'ny hazo izay napetaka teo amin'ny vozon'ny biby roa, indrindra ny omby, mba hahafahan'izy ireo misintona entana maromaro. Jesosy dia manao fanavahana mazava ny enta-mavesatra izay efa iaretantsika sy ireo izay napetrany amintsika. Ny zioga dia mampifandray antsika aminy ary misy fifandraisana akaiky vaovao. Ity fifandraisana ity dia ampahany amin'ny fandehanana am-pifandraisana sy fifandraisana aminy.
Jesosy tsy niantso anay mba hiditra amina vondrona lehibe iray. Te hiaina fifandraisana roa miaraka amintsika izy izay akaiky sy tsy manam-petra ka afaka milaza isika fa mifandray aminy toy ny zioga!
Ny fitondrana ny ziogan'i Jesosy dia midika mampifanaraka ny fiainantsika manontolo aminy. Jesosy dia miantso antsika ho fifandraisana akaiky sy maharitra ary mavitrika izay itomboan'ny fahalalantsika azy. Mitombo isika amin'io fifandraisana io amin'ilay ifandraisantsika amin'ilay zioga. Amin’ny fandraisana ny ziogany, dia tsy mitady ny hahazo ny fahasoavany isika, fa mitombo vao manaiky azy io.
Ny mamela an’i Jesosy hifehy anao eo ambany ziogany dia midika tsy handray anjara amin'ny asany, fa mianatra koa avy aminy amin'ny alàlan'ny fifandraisanao aminy. Ny sary eto dia ny an'ny mpianatra iray izay mifandray amin'i Jesosy, ary ny masony dia mifantoka tanteraka aminy fa tsy mandeha amin'ny sisiny fotsiny ary mibanjina eo alohany. Tokony hiara-mandeha amin'i Jesosy isika ary haka ny fomba fijerintsika sy ny torolalana avy aminy. Tsy mifantoka loatra amin'ny enta-mavesatra ny fifantohana, fa amin'ilay iray ifandraisantsika. Ny miaina miaraka aminy dia midika hoe hianatra bebe kokoa momba azy isika ary mahalala marina hoe iza izy.
Malemy fanahy sy maivana
Ny zioga natolotry i Jesosy antsika dia malefaka sady mahafinaritra. Any amin'ny toeran-kafa ao amin'ny Testamenta Vaovao dia ampiasaina amin'ny famaritana ny fihetsika mamindra fo sy ny hatsaram-panahin'Andriamanitra. "Nahatsapa fa tsara ny Tompo" (1 Petera 2,3). Nolazain'i Lioka fa "tsara fanahy sy ratsy fanahy izy" (Lioka 6,35).
Ny maivana na ny ziogany dia "maivana". Ity angamba ny teny manaitra indrindra ampiasaina eto. Tsy mavesatra ve ny enta-mavesatra? Raha maivana kosa, ahoana no ahafahana manamaivana?
Tsy mavesatra, malefaka, ary maivana ny entany satria kely kokoa ny enta-mavesatra noho ny antsika, fa satria momba antsika, momba ny fandraisana anjara amin'ny fifandraisany am-pitiavana, izay mifandray amin'ny Ray.
Amin'ny alàlan'ny fampitondrany io ziogany io sy ianarany avy aminy izay lazain'i Jesosy amintsika dia omeny fitsaharana. Mba hanamafisana izany, namerimberina izany hevitra izany indroa i Jesosy, ary fanindroany nilaza izy fa hahita fitsaharana "ho an'ny fanahintsika". Ny foto-kevitry ny fitsaharana ao amin'ny Baiboly dia mihoatra lavitra ny fanelingelenana ny asantsika. Manorina amin'ny foto-kevitra hebreo amin'i Shalom izy - fikasan'Andriamanitra ny hananan'ny olony hanana fanambinana sy fiadanan-tsaina ary hahafantatra ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny lalany. Saintsaino izao: inona no tian'i Jesosy homena ireo izay antsoiny? Ny fanasitranana ho an'ny fanahinao, famelombelona ary fahasalamana feno.
Azontsika tsoahina avy amin’izany fa ny vesatra hafa entintsika miaraka amintsika raha tsy manatona an’i Jesosy dia tena mandreraka sy tsy mamela antsika ho irery. Ny fiarahana aminy sy hianarany aminy dia ny fitsaharana Sabatantsika, izay tonga hatrany am-pon'ny olona iray.
Malemy fanahy sy manetry tena
Ahoana no ahafahan'i Jesosy halemy fanahy sy fanetren-tena manome azy fiadanan-tsaina? Inona no tena ilaina amin'i Jesosy? Nilaza izy fa ny fifandraisany amin'ny rainy dia tena manome sy mandray andraikitra.
«Natolotra ahy avy amin'ny raiko ny zava-drehetra, ary tsy misy mahalala ny zanany afa-tsy ny ray ihany; ary tsy misy mahalala ny rainy afa-tsy ny zanakalahy sy izay tian'ny zanany hasambarana » (Matio 11,27).
Nandray ny zavatra rehetra avy amin'ny Ray i Jesosy satria nomen'ny Ray azy. Namariparitra ny fifandraisan'ny raim-pianakaviana izy sy ny raim-pianakaviana ho toy ny fifankatiavan'ny samy hafa, manokana ary mifankahalala. Tokana io fifandraisana io - tsy misy olona afa-tsy ny ray mahalala ny zanakalahy toy izao ary tsy misy olona afa-tsy ny zanaka izay mahalala ny rainy amin'ny fomba toy izao. Ny maha-akaiky azy ireo sy mandrakizay.
Inona no ifandraisan'ny filazan'i Jesosy ny tenany ho malemy fanahy sy manetry tena amin'ny famaritana ny fifandraisany amin'ny rainy? Jesosy dia "mpandray" izay mandray avy amin'ilay olona fantany tsara. Tsy vitan'ny miondrika ivelany fotsiny ny fanomezana nomen'ny ray, fa manome amim-pahalalahan-tanana izay nomeny azy amim-pahalalahan-tanana. Faly i Jesosy fa miaina ao anatin'ny tony izay tonga satria mizara izany amin'ny Ray amin'ny fifandraisana mifankatia sy tia sy manome.
Ny firaisan'i Jesosy
Jesosy dia mifototra amin'ny dinika sy mifandray tsy tapaka amin'ny Ray eo ambanin'ny ziogany ary io fifandraisana io dia efa nisy mandrakizay. Izy sy ny ray dia tena mifamatotra manome sy maka. Ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona dia nilaza i Jesosy fa manao sy miteny fotsiny izay hitany sy reny ary mandidy ny Ray. Manetry tena sy malemy fanahy i Jesosy satria mifandray amin'ny rainy amin'ny fitiavany azo antoka.
Nilaza i Jesosy fa ny olona mahalala ny Ray ihany no nofidiny hambara aminy. Nantsoiny daholo ireo olona niaiky fa miasa mafy sy terena. Tonga amin'ny olona rehetra izay miasa mafy sy mavesatra ny antso, misy fiantraikany amin'ny rehetra. Jesosy dia mitady olona vonona handray zavatra.
Antsoin'i Jesosy isika "hifanakalo entana". Ny didin'i Jesosy ho avy, haka sy handray lesona avy aminy dia manambara ilay didy handao ny enta-mavesatra izay ianarantsika aminy. Mamoy izany isika ary omena azy. Jesosy dia tsy manolotra antsika enta-mavesatra sy ziogany hampidirana antsika amin'ny enta-mavesatra sy zioga. Tsy manome torohevitra momba ny fomba hitondrana ny entantsika amin'ny fomba mahomby kokoa sy amin'ny fomba mahomby izy ireo mba hisehoany ho maivana kokoa. Tsy omeny antsika ny volon-tsoroka, hany ka manosika antsika tsy an-kijanona ny felan-kevitray.
Koa satria niantso an'i Jesosy ho fifandraisana tsy manam-paharoa isika miaraka aminy, dia nangataka antsika hanome azy aminy ny zavatra rehetra mandanja antsika. Rehefa manandrana mitondra ny zava-drehetra ho an'ny tenantsika isika dia manadino hoe iza Andriamanitra ary mijanona tsy mijery an'i Jesosy. Tsy mihaino azy intsony izahay ary manadino ny mahafantatra azy. Ny enta-mavesatra tsy ampidirintsika dia mifanohitra amin'ny tena nomen'i Jesosy antsika.
Mitoera ao amiko
Nomen'i Jesosy ny mpianany ny baiko "hijanona ao aminy" satria ireo no sampany ary izy no voaloboka. «Mitoera ao amiko ary Izaho ao aminareo. Tahaka ny voaloboka tsy hamoa avy aminy raha tsy mijanona ao amin'ny voaloboka izany, dia tsy toy izany koa ianao raha tsy mijanona amiko. Izaho no voaloboka, ianareo ny voaloboka. Izay mitoetra ato amiko ary Izaho ao aminy dia mamoa be; satria raha tsy amiko dia tsy mahay manao na inona na inona » (Jaona 15,4-5).
Miantso anao i Jesosy mba handray ity zioga mahafinaritra sy manome fiainana ity isan'andro. Miezaka i Jesosy mba hahafahantsika miaina bebe kokoa hatrany ao amin'ny fiadanany, tsy amin'ny fotoana fotsiny ihany fa fantatsika fa mila izany isika. Amin'izay dia afaka mizara ny ziogany isika, dia hasehony antsika bebe kokoa ny zavatra mbola fitaovantsika, ny tena mahaforona harerahana ary manakana antsika tsy hiaina am-pilaminana.
Mihevitra izahay fa afaka mandray ny ziogany taty aoriana rehefa avy nahafantatra ny zava-nisy ary nampitony ny raharaha. Ary rehefa napetraka izy ireo, rehefa azo ampiharina kokoa ny miaina sy manao zavatra amin'ny toerana itazomana ny fahatoniantsika isan'andro.
Rehefa atolotrao an'i Jesosy ny enta-mavesanao rehetra, tadidio fa izy no mpisoronabe. Amin'ny maha mpisoronabe lehibe antsika dia efa mahalala ny enta-mavesatra rehetra izy ary mikarakara sy mikarakara antsika. Nentiny ny fiainantsika tapaka, ny olantsika rehetra, ny tolona, ​​ny ota, ny tahotra, sns., Ary ny tenany no nataony hanasitranana antsika ao anaty. Afaka matoky azy ianao. Tsy tokony hatahotra ny fampitaovana ianao: enta-mavesatra taloha, ady vaovao, kely, toa tsy dia misy dikany ary toa toa lehibe loatra. Vonona sy mahatoky foana izy - mifandray aminao sy amin'ny raim-pianakaviana izy, samy manana fanahy.
Ity dingana mitombo ity efa zatra mifandray amin'i Jesosy - miala aminao, ny fiainam-baovao amin'ny fitsaharany - mitohy ary mihamafy hatrany amin'ny fiainanao manontolo. Tsy misy ny ady na ny ady ankehitriny na ny ahiahy hatahotra kokoa noho ity antso ity aminao. Inona no antsoiny aminao? Izy tenany, hizara amin'ny fiainany, ao anatin'ny fitony. Tokony ho fantatrao izany raha mandray ny entana tsy mety ianao ary entinao miaraka aminao. Tsy misy afa-tsy vesatra iray ihany no niantsoana anao hitondra izany dia i Jesoa.
avy amin'i Cathy Deddo